Jaamacadaha ugu jaban Ardayda Caalamiga ah ee Adduunka iyo Sida Loo Codsado 2022
November 27, 2021 Okpara Francis
Jaamacadaha ugu Qaalisan Ardayda Caalamiga ah ee Dunida iyo Sida Loo Codsado
Waad salaaman tihiin dhamaantiin, marba marka ka dambeysa waxaan u nastaa sidii aanan mar dambe qori doonin laakiin taasi run maahan, markan waxaan helay liiska tobanka ugu sareeya. jaamacadaha ugu jaban ardayda caalamiga ah ee adduunka waanan ogahay inay ku xiisayn lahayd inaad wax ka barato iyaga.
Mid ka mid ah waxyaabaha la hubo ayaa ah, xitaa haddii aan ku daalayo qorista, fikirka ah in aan idinka caawiyo sidii aad ku guuleysan laheyd riyadaada ah inaad wax ku barato dibadda ayaa igu sii xoojineysa inaan sii wado
Tani waxay adiga kugu saabsan tahay adiga oo ah arday caalami ah oo raadinaya habab lagu yareeyo kharashka ku baxa daraasaddaada-dibedda oo aad haddana natiijooyinka ugu badan ka hesho daraasadda. Jaamacadaha liiskan ku yaal waxay aqbalaan ardayda caalamiga ah ee aad ugu wanaagsan tacliin ahaan. Maxaa ka badan helitaanka jaamacad dibedda ah oo qiimo jaban? I sudh markii aan fiiq-furayo xirmada.
1 Jaamacadaha ugu Qaalisan Ardayda Caalamiga ah ee Dunida
1.1 10. Jaamacadda Duke
1.2 9. Jaamacadda Delaware
1.3 8. Kulliyadda Connecticut
1.4 7. Kuliyada Saddexley
1.5 6. Kuliyadda Middlebury
1.6 5. Kuliyadda St. Olaf
1.7 4. Jaamacadda Arkansas
1.8 3. Jaamacadda West Virginia
1.9 2. Jaamacadda Georgetown
1.10 1. Jaamacadda Washington
Jaamacadaha ugu Qaalisan Ardayda Caalamiga ah ee Dunida
Waxaan bilaabayaa liiskan kan ugu horeeya ilaa kan ugu dambeeya sida aan marka hore liiska ugu dambeeya ku yeelan doonno, marka waxaan ka tirineynaa 10 ilaa 1. Yaa diyaar ah? Aan shidno!
10. Jaamacadda Duke
Kan ugu dambeeya liistadayda oo kan ugu horreeya halkan waa Jaamacadda Duke ee Durham oo leh xarumo ku yaal Singapore iyo Shiinaha. Duke wuxuu ardayda siiyaa fursad ay ku bartaan dibedda meel kasta oo ka mid ah xarumahooda midkoodna Shiinaha ama Singapore, xulashada adigaa iska leh inaad sameyso.
Wadarta Qiimaha: $ 21,295, Kharashka Waxbarashada: Laga bilaabo agagaarka $ 6,500 (kuma jiraan safarka diyaaradaha iyo kharashyada kale).
Jaamacadda Duke ma qaali baa markaa? Maya waana taas sababta loogu soo saaray liistadayda tobanka jaamacadood ee ugu jaban ardayda caalamiga ah ee adduunka. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inaad ogaato in sida Duke u muuqan karo, ay tahay tan ugu qaalisan liiska, haa, taasi waa sababta ay ugu jirto kaalinta 10aad.
9. Jaamacadda Delaware
Bal eeg qof kale oo qurux badan, Jaamacadda Delaware. Iskuulku wuxuu ku yaalaa Newark waxayna kaa qaaddaa khidmad waxbarasho oo ka bilaabmaysa hareeraha $ 3,200. Iyadoo wadar ahaan ku saabsan $ 15,149, waad hubtaa inaad ka nadiifiso lacag kasta oo laga bixin karo Delaware oo aad ku raaxeysato sidii arday waqti buuxa ah.
8. Kulliyadda Connecticut
In kasta oo lacagta ay ka qaadaan khidmadaha waxbarashada aan lagu qorin khadka tooska ah sababo iyaga u gaar ah awgood, oo ku saabsan $ 27,417 hadda, waxaad awoodi doontaa inaad ka saarto dhammaan khidmadaha sanadka ee Connecticut.
Waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso sababta aan Connecticut ugu dhigay 8th liiska, maxaa yeelay inkasta oo ay tahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu raqiisan ardayda caalamiga ah ee adduunka, waxay sidoo kale siisaa mid kasta oo ka mid ah ardaydeeda arday badan $ 3000 in lagu tababaro tababar dibadda ah; sax yaab?
7. Kuliyada Saddexley
Trinity College waxay ku taalaa Hartford laakiin waxay leedahay xarun u gaar ah oo ku taala Rome iyada oo in ka badan sagaal barnaamijyo waxbarasho oo ay taageerayaan jaamacadu ay siiyaan ardaydooda.
Marka laga reebo duulimaadka aad ku degto Hartford, waxaad u baahan doontaa wax ku saabsan $ 23,980 si loo xalliyo khidmad kasta oo loo baahan yahay in la bixiyo si loo qaato barnaamijka shahaadada koowaad ee Trinity. Khidmadooda saxda ah ee wax lagu barto waa mid is bedbeddela oo kolba waqti u beddela ardayda cusub.
6. Kuliyadda Middlebury
Magaca ayaa u muuqda girlish right? Hagaag, taasi waa wadanka ay ku taalo dhufayskan barakaysan ee waxbarashadu; gudaha Middlebury. Kuleejkani maahan oo kaliya mid ka mid ah jaamacadaha ugu raqiisan ardayda caalamiga ah ee adduunka laakiin sidoo kale hal jaamacad oo u dirta ardaydeeda in ka badan 40 goobo kala duwan oo ku saabsan 17 dal oo kala duwan oo loogu talagalay tababbarka iyo dhibcaha fasalka.
Sidee u egtahay inaad u timid inaad wax ku barato dibedda oo waxaa laguu dirayaa xitaa dalal badan oo caalami ah inta lagu gudajiray ardaynimadaada? Cajiib, waa inaad jeceshahay Middlebury horeyba!
Iyada oo ku saabsan 20 - 30k doolar diyaar, waa inaad la xiriirtaa MB College heshiis!
5. Kuliyadda St. Olaf
Waxaan jaamacaddaan ku tilmaami jiray "kulint kulligood qosol kulleejo"… Dhammaan waxay u baahan yihiin inay si kasta u qoslaan iyo Olaf College, dhammaantood waa inay qoslaan! Taasi waa farxad.
Olaf wuxuu ku yaal Northfield wuxuuna bixiyaa barnaamijyo caalami ah oo ka baxsan xerada ardayda caalamiga ah. Waxay sidoo kale bixisaa barnaamijyo deeq waxbarasho oo macnaheedu yahay arday ahaan, waad dalban kartaa oo naftaada ku soo dejin kartaa deeq waxbarasho si aad u bilowdo barashada bilaashka ah.
Kharashka waxbarashadooda ayaa ka bilaabanaya $ 2000 laakiin ku saabsan $ 25k waa inaad awoodid inaad iska nadiifiso dhammaan khidmadaha.
4. Jaamacadda Arkansas
Waxay ku taal Fayetteville waxayna u baahan tahay wadarta qiimaha ku saabsan $ 14,693 iyada oo khidmadaha waxbarashadu ay ka bilaabanayaan qiyaastii $ 3k.
Waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu raqiisan ardayda caalamiga ah adduunka waxaana u aqoonsan in badan jaamacad heer caalami ah.
3. Jaamacadda West Virginia
Waxay ku taalaa Morgantown oo ay ku jiraan marti-sharaf arday caalami ah oo ka kala timid meelo kala duwan oo adduunka ah.
Jaamacadda West Virginia ayaa laga yaabaa inay tahay jaamacadda labaad ee ugu jaban ardayda caalamiga ah ee adduunka laakiin sababo jira awgood, waa seddexaad liiska.
Jaamacadu waxay bixisaa koorsooyin kala duwan oo ah shahaadada koowaad iyo tan koowaad ee jaamacadeed waana tan ugu fiican waxa ay qabtaan. Waxay ka qaadaan khidmadda khidmadda sida ugu hooseysa $ 1.5k iyo wadar ahaan ku saabsan $ 10k waad iska nadiifin laheyd dhamaan ujrooyinkaaga sidii arday cusub.
2. Jaamacadda Georgetown
Waxay ku taal Washington oo leh khidmadda waxbarashada laga bilaabo $ 5.5k. Iyada oo ku saabsan 25-30k doolar waa inaad awood u yeelatid inaad nadiifiso dhammaan khidmadaha la bixin karo sida arday caalami ah oo ka socda Jaamacadda Georgetown.
Hadda neef xoog leh qaado oo naso ka hor inta aanad u gelin kan ugu horreeya liiska. La dhammeeyay samee, fadlan. Waxaad ku dhowdahay inaad aragto waxa ugu fiican sanadkaan arday caalami ah oo doonaya inuu dibedda wax ku barto. Waad la yaabi doontaa inaad ogaato inaad si dhab ah wax u baran kartid sida ugu hooseysa ee aan kuugu wargaliyo hadda.
Markii ugu dambeysay ee aan wax ka qoro jaamacadaha waxbarashada hoose ee Kanada laakiin liiskaas, waxaan ka hadlayey oo keliya khidmadaha waxbaridda laakiin halkan, waxaan ka hadlayaa labada ujrooyinka waxbarashada iyo wadarta kharashka waxbarashada.
Waxaad hubtaa inaad qaadatay neef qoto dheer markaa aan aragno iskuulka oo marka hore taagan liistada jaamacadaha ugu raqiisan ardayda caalamiga ah ee adduunka iyo sababta ay sidaas u tahay.
1. Jaamacadda Washington
Dugsigani wuxuu ku kacaa lacag $ 700 sida khidmadaha waxbarashada, ugu jaban ee aad ka heli karto meel kasta oo dibedda ah.
Iyadoo wadarta kaliya 9 - 10k doolar, waad iska nadiifin doontaa dhammaan khidmadaha la bixin karo sida arday caalami ah oo si buuxda ayaa looga qori lahaa jaamacadda.
Jaamacadaha Waxbarashada Yar
waxbarasho jabanjaamacadaha waxbarashada jabanjaamacadaha ugu jaban ardayda caalamiga ah ee adduunkawaxbarasho hooseeyajaamacadaha waxbarashada hoosejaamacadaha waxbarashada hoose ee ardayda caalamiga ah ee adduunka
Previous Post:10 Dallas Fiqi Seminary Koorsooyin Bilaash ah
Post Next:15 Faa’iidooyinka Wax Ku Barista Talooyinka Qormada Dibedda